Muddee 28, 2020
Naannoo Benishaangul Gumuuz, Itoophiyaa
Bulchiinsa naannoo Benishaanguul Gumuuz godina Matakkal, aanaa Bulan,ganda Kujii keessatti torban darbee namoonni 200 ol ajjeefamuun ni yaadatama.
Jiraattuu ganda Kujii kan ta'an Aaddee Izibaayee Araggaa akka jedhanti Roobii darbee jechuun Mudee 23 bara 2020 barii sa'a 12 irratti sagalee dhukaasaa dhaga'aa turre. Sana booda hidhattonni foddaa mana koo cabsanii bombii mana keessatti darbatan jedhan.
Yeroo sana mana ofii keessa ijoollee isaanii 6 waliin akka turan kan ibsan addee Izibaayee, ilmii isaanii umriin 17 battalumatti ajjeefamuu fi ofii isaanii waliin ijoolleen lama madaa'uu dubbatan.
Yeroo amma ijoollee isaanii hafan 5 waliin mana obboleessa abba manaa isaanii tti baqatanii akka jiran, iddoo dur jiraataa turanti deebi'uuf sodaa akka qaban ibsan.Abbaan warraa Oneeg Shanee deggerta jedhamuun hidhaa keessa akkamjiranis ibsan.
Gama kaaniin achuuma dhalataa godiina Matakkal kan ta'an ogeessa seeraa Obbo Tamasgeen Gammachuu Dibaaxee irraaa akka nu ibsanti, rakkoon Mattakal keessaa waggaa lama dura bulchiinsa naannoo Amaaraa bakka Jaawwii jedhamtuutti namoonni Gumuuz 200 ta'an ajjeefamuu fi sana booda warri hafan gara bulchiinsa naannoo Beneshaangul Gumuuzti dheessuu dubbatu.
Kanaaf jecha tarkaanfiin Gumuuz fudhatan kan haaloo ba'iinsaa a'u, keessumaa baatilee darban 3 keessatti jarreen Gumuuz hedduun bosonatti galuu ibsan.
Haala adda ta'een fixiinsa torban darbee dhaqqabeef sababaa, aangawoonni bulchiinsa naannoo lameenii gama midiyaan jechoota hamaa walitti darbataa jirantu qooda qaba jedhu.
Kanaaf jecha mootummaan Federaalaa gam lameenii irraa warra waan dubbataniif itti gaafatamoo ta'an seera duratti dhiyeessuun, warra Gumuuz kanneen bosonatti galan deebi'anii akka hawaasatti dabalam gochuun sana booda mariin furamuu qaba jedhu.
Kanaan ala gam tokko irratti qofa tarkaanfiin fudhatamu furmaata hin ta'u jedhu Obbo Tamasgeen Gammachuu.
Barii Lafaa Foddaa Mana Koo Cabsanii Bombii Mana Keessatti Darbatan.Ilmii Koo Ajjeefamee kaan Keenya Madoofne:Jiraattuu Godiina Matakkal